Warsaxaafadeed beesha Sacad Habargidir - Hadaan deg deg loo sii deyn waxgalka Hawiye ?
30 June 2013 Waagacusub.com-Beesha Sacad Habargidir waxay been iyo wax kama jiraan ku tilmaameeysa dacaayada ay faafiyeen cadawga beelweynta Hawiye,waxaana safka hore uga jirnaa qadiyada guud ee beelweynta.
Beesha Sacad Habargidir marna difaaci meyso hogaamiyaha argagixisada ee Hassan Dahir Aweys laakiin marna aqbali ma doonto in gacan ka baxsan Dowladda Federalka Somalia ku tagri fasho xaquuqdiisa.
Beesha Habargidir waxay awood u laheyd inay Hassan Dahir Aweys talis Melleteri iyo Magangalyo ka siiso Galgaduud iyo Mudug laakiin si aan u ilaalino sunaha Dowladnimada ayaan ugu wareejinay Dowladda Federalka Somalia sidaas darteed hadii ay ka baxdo qodobadii lagu wada heshiiyay waxay ka dhigan tahay Dowlad ay madax ka yihiin shaqsiyaad qaba dakano qabiil iyo dad gaara.
Beesha Sacad Habargidir ma metelo Wasiirka Arrimaha gudaha Abdikariim Hussein Guuleed ,waana nasiibdaro inuu beesha Ceyr u dhibaateeyo inay aabahiis dileen mudo laga joogo afartan sano.
Wasiir Abdikariim Guuleed wuxuu sheegay in Hassan Dahir Aweys iyo Yusuf Indhacadde xasuuqeen beesha Sacad Habargidir xilligii Maxaakiimta laakiin qadiyada nuucaasa lama qabto beesha Sacad lamana joogo xilligii laga wada hadli lahaa,iyadoo laga fogaanayo aargoosi dhaawici kara wada dhalashada guud.
Beesha Sacad Habargidir waxay si rasmiya ula shaqeeysay Shariif Sheekh Ahmed oo ahaa Gudoomiyahii Maxaakiimta ee argagixisadii laayay Ciiltirayaasha beesha Sacad sidaas darteed marnaba suurtagal nagama ahan inaan aargoosi ku sameeyno walaalaheena beesha Ceyr.
Beesha Sacad Habargidir waxay u diyaar tahay inay difaacdo qadiyada guud ee beelweynta Hawiye gaar ahaan tan Habargidir iyadoo aan loo kala saarin ,Ceyr ama Suleymaan sidaas darteed ,waa dacaayad iyo sheeko raqiisa in Sacad sameeynayaan aargoosi ka dhana walaalaha beesha Ceyr.
Beesha Sacad Habargidir waxay Dowladda Federalka ugu baaqeeysaa inay guud ahaan waxgalka beelweynta Hawiye gaar ahaan dadka sida gaarkaa loo bartilmaameedsaday ee Habargidir ka sii daayaan Xabsiga 24 saac gudahood.
Hadii Dowladda Federalka Somalia sii deyn weysay waxgalka beelweynta Habargidir waxay beesha Sacad si rasmiya u iclaamineysaa dagaal jihaada oo lala galo Madaxda Dowladda Somalia si awood Melleteri loogu soo furto madaxda u xiran.
Beesha Sacad Habargidir waxay ugu dambeyn Cambaareeyn dusha uga tuureeysaa Wasiir Abdikariim Hussein Guuleed oo ku dhiiraday inuu si ka baxsan sharciga u xiro Xildhibaano iyo Masuuliyiin u dhashay beesha Habargidir kuwaas oo si masuuliyad ku jirta Muqdisho u keenay Hassan Dahir Aweys.
Nasiibdarada ugu weyn waxay tahay in madaxda xabsiga loo taxaabay yihiin kuwa u dhashay qabiilada Ceyr iyo Suleymaan sidaas darteed waxay muujineysaa falsafad Midab takoor iyo qeybi,oo xukuna.
Masuuliyiinta Habargidir ee la xiray waxaa ka mida,
Xildhibaan Mahad Mohamed Salaad.
Xildhibaan Abdulkadir Ali Omar
Jeneral Yusuf Indhacadde.
Nabadoon Ahmed Diiriye,
Nabadoon Abukar Ganeey Ugaas Abdi Dahir Cagajabeey
Fiiro gaara: Warsaxaafadeedkaan waxaa saxiixay Salaadiinta -Siyaasiyiinta iyo Culumadda beesha Sacad Habargidir ee golaha waxaana soo gelin doonaa dukumiintiga oo saxiixan.